Farmaajo oo bogaadiyay in wax soosaarka dalka loo iib geeyo dibadda | Dhacdo
Farmaajo oo bogaadiyay in wax soosaarka dalka loo iib geeyo dibadda
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay in awood-siinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iib geeyo wax soosaarka dalka ay kor uqaadeyso dhaqaalaha dalka, fursadaha shaqaaleysiinta dhalinyarada iyo heer nololeedka shacabka.
Madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay Wasiirada Wasaaradaha Kalluumaysiga & Khayraadka Badda, Cabdullahi Bidhaan Warsame, Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Duraan Axmed Faarax ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in ganacsiga kala dhaxeeya dalkeena dalalka dariska uu ku saleysan yahay isu dheelitirnaan iyo wax wada-qabsi, iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ay helayaan dheef-dhaqaale, oo u dhiganta tan dhigooda badeecadaha keensada dalka.
Maamulaha Shirkadda dhoofisay Kalluunka maanta loo iib geeyay Itoobiya ee qaybta ka ah is-dhaafsiga dhaqaale ee labada dal, Maxamed Ibraahim Cali (Cajiib) oo kulanka ka qaybgalay ayaa uga mahadceliyay Madaxda dalka mudnaanta ay siinayaan xal u helista caqabadaha ku xeeran ganacsatada Soomaaliyeed, oo ay ugu horreyso suuq-geynta heer gobol iyo jaangooynta fursadaha.
Wasiirka Kalluumaysiga & Khayraadka Badda Mudane Cabdullahi Bidhaan Warsame iyo Wasiirka Gaadiidka & Duulista Hawada, Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in fursadaha iskaashiga ganacsi ee dalalka dariska ah ay barbar socdaan dib u dhiska kaabeyaasha dhaqaalaha, isu dheelitirka ganacsiga aan la wadaagno dalalka dariska ah iyo xoojinta wax soosaarka, taas oo suurtagelinaysa in dalagyada iyo wax soosaarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka gobolka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa bogaadiyay suuqa ganacsi ee u soo kordhay kalluumaysatada dalka, waxa uuna xaqiijiyay in la jooggo waqtigii aynu kula tartami lahayn dalalka gobolka wax soosaarka gudaha dalkeena.